नेपालीहरुको सपना साकार भएकाे दिन – Shirish News
महेन्द्रनगर(धनुषा), ३ गते असोज
कुनै बेला थियो जब राजा र राणाको ‘बोली नै कानून’ हुने गर्दथ्यो । अहिले नेपालीहरुले आफैले लेखेको संविधानबाट देश चलिरहेको अवस्था छ।
नेपालको संविधानको यात्रालाई सरसर्ती जोड्दा ६८ वर्ष भएको देखिन्छ । २००४ देखि २०७२ सम्म आउँदाको जम्माजम्मी ६८ वर्षको यति छोटो अवधिमा नागरिकका संवैधानिक हकमा छलाङ मारेको मुलुक विश्वमा सम्भवतः पहिलो भएको संविधानविदहरुको कथन रहेको छ ।
नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७ कै कल्पना थियो, ‘संविधानसभाबाट नयाँ संविधान’ । नेपालीहरुको त्यो कल्पना र सपनालाई नेपालको संविधान २०७२ ले साकार पारेको छ । नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७ को प्रस्तावना मै ‘श्री ५ महाराजाधिराजबाट अबदेखि हाम्रा प्रजाको शासन उनीहरू आफैंले रोजेको विधान परिषद्ले बनाएको प्रजातन्त्रात्मक विधान अनुसार हुनुपर्छ भन्ने इच्छा र दृढ संकल्प प्रकट गरिबक्सेको’ लेखिएको थियो।
यसको अर्थ मुलुकमा संविधानसभाको बीउ त्यहीवेला रोपिएको थियो। तर, गर्भमा राम्ररी बस्न नपाउँदै तुहिन पुग्यो। र, संविधानसभाबाट मुलुकको संविधान बनाउने सपना साकार हुन अर्को ५७ वर्ष पर्खिनु प¥यो ।
४ मंसीर २०७० मा भएको दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठित सभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरे सँगै २००७ सालको संवैधानिक प्रतिबद्धता र राजनीतिक अजेन्डाले मूर्तरूप पायो ।
नयाँ संविधानले मानवअधिकारका नवीन अवधारणाहरूलाई मौलिक हकको रूपमा समेटेको छ। राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। पछि पारिएका जातीय समूह मात्रै होइन, सामाजिक समूहका सवाल पनि संविधानले सम्बोधन गरेको छ।
संविधानविदहरुले मानवअधिकारका नवीनतम सिद्धान्त र समावेशी प्रतिनिधित्व लगायतका कतिपय विषयमा यो संविधान छिमेकी मुलुकहरू भन्दा अघि बढेको दाबी गर्छन्।
नेपालको संविधान– २०७२ घोषणा भएको तीन वर्ष पुरा भएको छ । संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार नै देशमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय (केन्द्रिय) गरी तीन चरणको निर्वाचण सम्पन्न भई संघीयता लागु भएको छ । प्रदेश सरकारहरु गठन भई प्रदेश सरकार संचालन हुँदै छ । यद्यपी क्षका कानुन निर्माण लगायतका अधिकांश कार्य बाँकी रहेका छन् । संविधान राष्ट्रिय दस्तावेज मात्र होईन यो राज्य संचालन, विधीको शासन र जनअधिकार रक्षाको एकमात्र अस्त्र हो ।
नेपालको संविधान सबैको साझा दस्तावेज हुन समेत अनिबार्य छ । संविधानका विविध ब्यवस्थाका सम्बन्धमा देशभित्र बाटै आम नागरिकले उठाएका आलोचना र उनीहरुको अधिकार रक्षाका लागि गरेका संशोधन प्रस्तावलाई अन्यथा मान्दै संक्रमणकाललाई निरन्तरता दिने अवस्था देशसँग छैन । राजनीतिक रुपमा एउटा ठुलो जनमतले अर्को आन्दोलनरत पक्षसँग गरेका सहमति कार्यन्वयनको बाटोमा छ ।
निरंकुश पञ्चायती ब्यवस्था बिरुद्ध सफल जनआन्दोलन २०४६ को म्याण्डेट अनुसार बनेको नेपालको संविधान बिरुद्ध देशभित्रै ६ वर्षपछि विरोधको स्वरमात्र सुनिएन । संविधान सभाको माग राख्दै देशले १० वर्ष लामो सशस्त्र द्धन्दको सामना गर्नुपर्यो । देशले दोश्रो कार्यकालमा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गरेको छ । संविधान घोषणा पश्चात सदन र सडकबाटै एउटा ठुलो जनमतले विरोध जनाई रहेकै अवस्था छ। राजपाले असोज ३ गते लाई कालो दिन भनेर नै मनाउने तयारी गरेको छ। विरोधका यी स्वरलाई अवमुल्यन गर्दा भविष्यको जिम्मेबारी कसले लिने ? यसैले पनि संविधान प्रतिको विरोध र आलोचनाले उग्र रुप लिनु अगावै यसलाई सर्व सम्मत र अपनत्व सहितको जनब्यापी बनाउनु आवश्यक छ ।
नेपालको संविधान यात्रा
प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको पालामा १९१० सालमा बनेको मुलुकी ऐन नै नेपालको पहिलो संहिताबद्ध कानून हो। त्यसअघि वैदिक परम्परा, धर्मशास्त्र, राजाका आदेश, ताम्रपत्र, सनद, सवाल, अभिलेख, पञ्जापत्र आदि शासन सञ्चालनका मुख्य श्रोत थिए।
२००४ मा अर्का राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानून’ जारी गर्नुभयो । त्यसयताका ६८ वर्षमा नेपालले ६ वटा संविधानको अभ्यास ग‍¥यो। तीमध्ये दुई वटा भने अन्तरिम संविधान थिए। सबै संविधानले तत्कालीन समयको राजनीतिलाई बोकेका थिए।
‘नेपालको संविधान २०७२’ मार्फत देशले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता अहम राजनीतिक दर्शन स्वीकार गर्नुका साथै कैयन् संवैधानिक व्यवस्थामा छलाङ मारेको छ। यसका निम्ति ‘अन्तरिम संविधान–२०६३’ पहिलो खुट्किलो सावित थियो। सबैको जग भने २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनलाई मान्नु पर्दछ ।
मुलुकको लिखित संविधानको इतिहास सात दशक भन्दा कम भए पनि जनप्रतिनिधि छनोट, सरकार गठन, नागरिकको मौलिक अधिकारजस्ता क्षेत्रमा यस बीचमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको मानिन्छ। संविधानविद्हरूका अनुसार यति छोटो समयमा संवैधानिक विकासको लामो फड्को विरलै देशहरूले मारेका छन्।
बेलायती उपनिवेशबाट भारत भर्खर स्वतन्त्र भएको र राणा शासन विरोधी आन्दोलन चर्किरहेको वेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले १३ माघ २००४ मा घोषणा गरेको ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानून’ लाई पहिलो संविधान मानिन्छ।
राणाशासनलाई नै निरन्तरता दिने उद्देश्यले बनाइएको उक्त संविधानमा सबै अधिकार राणा प्रधानमन्त्री र राजामा केन्द्रित गरिएको थियो। यो संविधान लागू नै हुन पाएन, त्यसपछिको जनक्रान्तिले २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य गरेपछि नयाँ अन्तरिम संविधान जारी गरियो। संविधानसभा निर्वाचनबाट नयाँ संविधान नबनुञ्जेल सम्मका लागि तत्कालीन राजा त्रिभुवनको मन्त्रिमण्डलबाट २९ चैत २००७ मा ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान’ जारी गरिएको थियो।
संविधानसभाको कल्पना पहिलो पटक यही विधान मार्फत गरिएको थियो। तर यो संविधानले कल्पना गरेको विधान परिषद्को चुनाव हुन नसकेपछि २०१५ सालमा संसदीय निर्वाचन भयो। नेपाली कांग्रेसले बहुमत हासिल ग¥यो। विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री चुनिनुभयो । तर, विधान परिषद्को साटो आयोगद्वारा संविधान बनाउन लगाइयो।
संविधानविद् सर आइभर जेनिङको परामर्शमा बनेको उक्त संविधान यसअघिको भन्दा उदार थियो। संविधानवादका सिद्धान्त अनुसार बनाइएको संविधानलाई १ फागुन २०१५ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले जारी गर्नुभयो । तर यो संविधान दुई वर्ष पनि टिकेन। १ पुस २०१७ मा राजा महेन्द्रले उक्त संविधान खारेज गर्दै ‘नेपाल विशेष व्यवस्था ऐन, २०१७’ जारी गर्नुभयो । त्यसको दुई वर्षपछि १ पुस २०१९ मा राजा महेन्द्रले नै ‘नेपालको संविधान, २०१९’ लागू भएको घोषणा गर्नुभयो ।
यो संविधानले २०१५ को संविधानले दिएको राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अधिकार र मौलिक हकका धेरै अधिकार खोस्यो। प्रस्तावनामा राजा मै राजकीय सत्ता र विशेषाधिकार निहित रहेको उल्लेख गरियो।
प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनाका लागि २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेस र वाममोर्चाको संयुक्त आन्दोलनको सफलतापछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा ‘संविधान सुधार सुझाव आयोग’ गठन गरियो, जसमा कांग्रेस, वाममोर्चा र राजाबाट सिफारिश सदस्यहरू थिए।
२३ कात्तिक २०४७ मा राजा वीरेन्द्रले उक्त संविधान जारी गर्नुभयो । संविधानवादका दृष्टिले उत्कृष्ट मानिएको यो संविधानको आयु पनि १६ वर्ष मात्र रह्यो।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, को गलत व्याख्या गरेर राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हत्याएपछि त्यस विरुद्ध आन्दोलनरत सात दल र सशस्त्र विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच १२ बुँदे सम्झौता भयो।
११ वैशाख २०६३ मा राजाले ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको’ घोषणापछि विघटित प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापित भयो।
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी समेतको सहभागितामा अन्तरिम व्यवस्थापिका र सरकार गठन भयो। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनुन्जेलका लागि ‘राजनीतिक सहमतिबाट’ तयार भएको अन्तरिम संविधान १ माघ २०६३ मा जारी भयो।
यो संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार गठित पहिलो संविधानसभाले संविधान नबनाई विघटित भयो। ४ मंसीर २०७० मा निर्वाचन भई गठित दाश्रो संविधानसभाले ३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान दिएको छ।
नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ ः
राज्यका तीनै अंगको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा । प्रधानमन्त्री कसै प्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने । पदमुक्त नहुने।
सरकारको कार्यकारिणी सम्बन्धी काम ‘श्री ५ महाराजाधिराज’ को नाममा गरिने।
प्रधानन्यायालयको व्यवस्था। प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रिमण्डलको सल्लाह अनुसार राजाले तोके जति न्यायाधीश रहने।
संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र। संसदीय शासन प्रणाली, कार्यकारिणी अधिकार ’श्री ५’ र मन्त्रिपरिषदमा
शक्तिपृथकी करणका सिद्धान्त ।
’श्री ५’, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभासहितको दुई सदनात्मक संसद्।
गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता।
संविधान २०७२ का १६ विशेषता
१. भाग २७, धारा ३०२ र अनुसूची ९ वटा रहेको यो संविधान लचिलो प्रकारको छ । संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विगतमा जस्तो आन्दोलन गरि रहनुपर्दैन, संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।
५. संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेछ । मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई संसद रहनेछन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वा्चित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य हुने छन् । राष्ट्रिय सभामा सात प्रदेशबाट निर्वा्चित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीनसहित ५९ सदस्य हुनेछन् ।
८. संविधानतः नेपाल धर्म्निरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ । तर, धर्म्निरपेक्षताको व्याख्या गर्दै भनिएको छ( धर्म्निरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता बुझ्नुपर्नेछ ।
१४. स्थानीय निकायको हकमा सरकारले गठन गर्ने आयोगले एक वर्ष्भित्र स्थानीय निकायको पुनर्सरचना गर्नेछ भने त्यसअघि स्थानीय निकायमा अन्तरिम चुनाव गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।
१५. चार वर्षका लागि निर्वा्चित भएका संविधानसभाका सदस्यहरु बाँकी कार्यकालका लागि (बढीमा साढे तीन वर्ष) रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको सदस्यका रुपमा कायम रहने छन् । तर, ०७४ साल माघभित्रै आम चुनाव घोषणा भएको अवस्थामा उम्मेद्वारी मनोनयनका दिनसम्म मात्रै उनीहरुको पदावधि रहनेछ ।
लेखक : राजनीतिशास्त्रका विध्यार्थीहुन् ।
जनकपुरमा सिके राउतको विशाल प्रदर्शन [फोटो फिचर]